Idiski yokuvelisa imveliso ye-Disc-YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Inkqubo epheleleyo kunye nezahlukeneyo zediski yenkqubo yokuvelisa imveliso yenye yeendlela eziphambili zeHenan Zheng Heavy Industries. Inokubonelela ngesisombululo esigqibeleleyo nesithembekileyo semveliso ngokweemfuno zabathengi.
Sinamava ekucwangcisweni nasekusebenzeni kweendlela zemveliso yezichumiso ezahlukeneyo. Asigxili kuphela kwinkqubo nganye yekhonkco kwinkqubo yemveliso, kodwa sihlala siqonda iinkcukacha zenkqubo nganye kumgca wemveliso yonke kwaye siphumelele ngempumelelo kunxibelelwano.
Umgca wemveliso yediski granulator ubukhulu becala isetyenziselwa ukuvelisa isichumiso sendalo. Isichumiso sendalo singenziwa ngemfuyo kunye nomgquba weenkukhu, inkunkuma yezolimo kunye nenkunkuma eqinileyo kamasipala. Ezi nkunkuma zezinto eziphilayo zifuna ukwenziwa kwakhona ngaphambi kokuba ziguqulwe zibe zizichumiso zezinto eziphilayo ezithengiswayo. Utyalo-mali ekuguquleni inkunkuma ibe bubutyebi kufanelekile.
Umgca wemveliso yesichumiso semveliso yesichumiso ulungele:
►Ukuveliswa kwesichumiso se-organic organic
►Ukuveliswa kwesichumiso se organic pig
►Ukuveliswa kwenkuku nenkuku yedada isichumiso sezinto eziphilayo
►Ukuveliswa kwemanyolo yezichumiso zezinto eziphilayo
►Ukuveliswa kwesichumiso se-organic
1. umgquba wezilwanyana: umgquba wenkukhu, umgquba wehagu, umgquba weegusha, umgquba weenkomo, umgquba wehashe, umgquba womvundla, njl.
2. Inkunkuma yemizi-mveliso: iidiliya, iviniga slag, intsalela yecassava, intsalela yeswekile, inkunkuma ye-biogas, intsalela yoboya, njl.
3. Inkunkuma yezolimo: umququ wezityalo, umgubo weembotyi zesoya, umgubo wekotoni, njl.
4. Inkunkuma yasekhaya: inkunkuma yasekhitshini
5. udaka: udaka lwedolophu, udaka lomlambo, udaka lokucoca ulwelo, njl.
Umgca wemveliso yediski yegranulation uhambile, uyasebenza kwaye uyasebenza, ubume bezixhobo bumbane, ukuzenzekelayo kuphezulu, kwaye ukusebenza kulula, okulungele ukuveliswa kwesichumiso semveliso.
1. Izinto ezinganyangekiyo ukubola nokumelana nazo zisetyenziswa kuzo zonke izixhobo zemveliso. Akukho zinto zintathu zingcolisayo, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo. Ihamba ngokuthe chu kwaye kulula ukuyigcina.
2. Amandla emveliso anokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi. Ubeko umgca wemveliso yonke compact, yenzululwazi kunye nengqiqo, kwaye iteknoloji phambili.
Idiski yezixhobo zemveliso yegranulation ibandakanya izinto zokugcina izinto → i-blender (sirring) → umatshini we-granulation ye-disk (i-granulator) → umatshini wokugungxula (ukwahlula iimveliso ezingekho mgangathweni kwiimveliso ezigqityiweyo) → isityumzi setyathanga (ukuqhekeza) → umatshini wokupakisha ozenzekelayo (ukupakisha) → ibhanti yokuhambisa ( Ukuqhagamshela kwiinkqubo ezahlukeneyo).
Qaphela: le layini yemveliso yeyokujonga kuphela.
Inkqubo yokuhamba kwediski yemveliso yegranulation ingahlulwa ngokwe:
1. Inkqubo yemveliso ekrwada
Umlinganiselo wempahla eluhlaza okomeleleyo unokuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwesichumiso. Izinto ezingafunekiyo zibandakanya ilindle lezilwanyana, iziqhamo ezibolileyo, amaxolo, imifuno eluhlaza, isichumiso esiluhlaza, isichumisi saselwandle, isichumisi sasefama, inkunkuma ezintathu, iintsholongwane kunye nezinye izinto ezingafunekiyo zenkunkuma.
2. Inkqubo yokuxuba okrwada
Zonke izinto eziluhlaza zixutywe kwaye zixubushe ngokulinganayo kwi-blender.
3. Inkqubo eyaphukileyo
Isityumzi sokutyhiliza ngokuthe nkqo sityumza iziqwenga zemathiriyeli zibe ngamaqhekeza amancinci anokuhlangabezana neemfuno zegranulation. Emva koko i-belt conveyor ithumela izinto kwi disk granulation machine.
4. Inkqubo yegranulation
I-disk engile yomatshini granulation umatshini isebenzisa ubume arc, kwaye ibhola uyila rate ukufikelela ngaphezulu kwama-93%. Emva kokuba izinto zingene kwipleyiti yegranulation, ngokujikeleza okuqhubekayo kwediski yegranulation kunye nesixhobo sokutshiza, izinto zibotshwe ngokulinganayo ukuze kuveliswe amasuntswana anomilo ofanayo kunye nemilo entle.
5. Inkqubo yokuhlola
Izinto ezipholileyo zithunyelwa kumatshini we-roller sieve ukuze kuhlolwe. Iimveliso ezifanelekileyo zinokungena kwindawo yokugcina izinto ngokuhambisa ibhanti, kwaye zinokufakwa ngokuthe ngqo. Amasuntswana angafanelekanga aya kubuyela kulungelelwaniso kwakhona.
6. Inkqubo yokupakisha
Ukupakisha yinkqubo yokugqibela yomgca wemveliso yezichumiso eziphilayo. Imveliso egqityiweyo ipakishwe ngomatshini wokupakisha wobungakanani ngokuzenzekelayo. Iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo kunye nokusebenza okuphezulu akufezekisi kuphela ubunzima obuchanekileyo, kodwa kugqibe ngokugqibeleleyo inkqubo yokugqibela. Abasebenzisi banokulawula isantya sokondla kwaye basete iiparameter zesantya ngokweemfuno ezizezona.